Firariantsoa anaty fahantrana | NewsMada
Firariantsoa anaty fahantrana
Iaraha-mahalala ny fisondrotry ny vidin-javatra, isaky ny faran’ny taona toy izao, indrindra ny vidin-tsakafo, ny kojakoja ilaina andavanandro, sns. Noho ny lalàn’ny tolotra sy tinady, mitombo ny isan’ny mpanjifa nefa tsy maharaka ny tolotra, mahatonga ny vidin’entana hiakatra. Tsy mahagaga izany, satria fotoana ifanolorana fanomezana, mitombo ny fivezivezena mampitombo ny fandaniana solika, fikarakarana lanonana samihafa. Mampitombo ny harin-karena faobe (PIB) izany, mampiaina ny toekaren’ny firenena ankapobeny.
Saingy raha tena zohina akaikaiky kokoa, misy elanelany be ny sokajina mpanjifa eto amintsika, ho an’ny manam-bola sy manan-katao (28%), andaniny, ary ny sahirana sy ny tsy manan-katolotra (72%), ankilany. Voalazan’ny mpahay toekarena rahateo fa saika tsy misy intsony ny saranga na sokajy anelanelany eto Madagasikara satria firenena fahadimy mahantra eran-tany. Raha tsorina ny marina, miaina anaty fahantrana ny maro an’isa amin’ny Malagasy. Araka ny fiteny hoe “tsy miaina” intsony, fa efa “mitazona aina” sisa.
Faniriana ka faniriana ny fanao isan-taona, mba ho ny soa no hifanodiavana fa lasa ny ratsy, hitady ka hahita, ho lava velona tsy harofy, sns. Saingy, hatreto, tsy nandroso ny fari-piainan’ny maro an’isa, maro ny mpianatra tsy afaka nanohy ny fianarany intsony satria sahirana ny ray aman-dreny, misakafo tapa-kibo ny isan-tokantrano, mirona any amin’ny asan-jiolahy ny tanora an-tanàn-dehibe sy ambanivohitra, lasa manao fitondran-tena tsy mendrika ny tanora vehivavy, sns.
Raha tanterahina tokoa ireny firariantsoa ireny, kely ny antoka ilazana fa tena manao izany ny tsirairay. Saika hita manerana ny sokajin’asa isan’ambaratongany ny kolikoly, ny halatra sy ny fanodinkodinam-bola amin’ny endriny samihafa. Samy manao daholo na ny lehibe mpitantana, na ny mpiasa tsotra, tsy anavahana na manan-karena na mahantra. Sao tenina eo amin’ny molotra fotsiny sisa ilay firariantsoa, fa ny fanao tsy miova. Izany tokoa ny vokatry ny fahantrana, mahantra ara-batana sy ara-tsaina ary sao ara-panahy ihany koa, satria mafy ny te hahazo fahagagana ?